Friends of MoeMaKa - Free Burma News Collection | Category | Burmese Military – တပ်မတော်ဆိုင်ရာ | Page 3
Category Archives: Burmese Military – တပ်မတော်ဆိုင်ရာ
Posted on April 18, 2016 by freeburma
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နှစ်သစ်ကူး ဆုမွန်စကားပြောကြား
via moi http://ift.tt/1VcjWhz http://ift.tt/1KnLGaX
Posted in Burmese Military - တပ်မတော်ဆိုင်ရာ	| Tagged Feedly, IFTTT, Military, Recently Read	| Leaveacomment |
Posted on March 28, 2016 by freeburma
တပ်မတော် ကန့်ကွက်သော်လည်း ခုံရုံး အဖွဲ့ဝင် ၂ ဦး အတည်ပြု ခန့်အပ်ခံရ
နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် လျာထားခံရသူ ဒေါ်ခင်ဌေးကြွယ်နှင့် ဦးတွာလ်ကျင်ပေါင်တို့ ၂ ဦးကို ခုံရုံး အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ခန့်အပ်ရန် တပ်မတော်က သဘောမတူသော်လည်း ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က မဲခွဲဆုံးဖြတ်၍ ခုံရုံးအဖွဲ့ဝင်များ အဖြစ် အတည်ပြု ပေးလိုက်သည်
The post တပ်မတော် ကန့်ကွက်သော်လည်း ခုံရုံး အဖွဲ့ဝင် ၂ ဦး အတည်ပြု ခန့်အပ်ခံရ appeared first on ဧရာဝတီ.
via ဧရာဝတီ http://ift.tt/1URo9GS http://ift.tt/1OYtTeJ
Posted in Burmese Military - တပ်မတော်ဆိုင်ရာ	| Tagged Cabinet, Feedly, IFTTT, Military, Recently Read	| Leaveacomment |
ဒုတိယသမ္မတအဖြစ် အတည်ပြုပြီးတဲ့ ဦးမြင့်ဆွေကို တပ်ကရွေးချယ်တာထက် စာရင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း ဦးသန်းရွှေ ကိုယ်တိုင်က စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်တယ်လို့ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ကြပါတယ်
The post တပ်ကရွေးတဲ့ ဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်တွေ appeared first on ဧရာဝတီ.
via ဧရာဝတီ http://ift.tt/1PAH3Kl http://ift.tt/1OYtTeJ
ဖွဲ့စည်းပုံ ခုံရုံးအဖွဲ့ဝင်တချို့ တပ် ကန့်ကွက်ပေမယ့် အတည်ပြု
သမ္မတသစ်နဲ့ လွှတ်တော် ဥက္ကဌတွေက အမည်စာရင်း တင်သွင်းတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးအဖွဲ့ဝင်အချို့ကို တပ်မတော်သား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တွေက ကန့်ကွက်ခဲ့ပေမယ့် လွှတ်တော်က မဲခွဲအဆုံးဖြတ် အတည်ပြုလိုက်ပါပြီ။ ခုံရုံး အဖွဲ့ဝင် အဖြစ်လျာထားခံရတဲ့ သူတချို့ကိုစစ်ဆေးတာမှာ စိစစ်နိုင်ဖို့ပေးထားတဲ့အချိန် နည်းပါးမှုနဲ့ ကိုယ်ရေးအချက် အလက်တွေကို တိကျစွာမဖော်ပြတာရယ်ကို ကန့်ကွက်လွှာတင်ခဲ့သူ က ထောက်ပြကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုတွေကို ဆုံးဖြတ်ပေးမယ့် နိုင်ငံတော်…
via Voice of America http://ift.tt/1PAH013 http://ift.tt/Tf1V41
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တပ်မတော်နေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲနှင့် ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲ တက်ရောက်
via Myanmar President Office http://ift.tt/1MuJuDu http://ift.tt/1V0lSqx
Posted on March 27, 2016 by freeburma
(၇၁)နှစ်မြောက်တပ်မတော်နေ့ အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ကြသည့် တပ်မတော် အငြိမ်းစားအရာရှိကြီးများအား တပ်မတော်(ကြည်း၊ရေ၊လေ) မိသားစုများက ဂါဝရပြု
via moi http://ift.tt/1TcBKaS http://ift.tt/1KnLGaX
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ မတွေ့ရတဲ့ တပ်မတော်နေ့ အခမ်းအနား
ယနေ့ မတ်လ ၂၇ ရက်တွင် ကျရောက်သည့် ၇၁ ကြိမ်မြောက် တပ်မတော်နေ့ စစ်ရေးပြ အခမ်းအနားသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင် အစိုးရသစ်ခေါင်းဆောင်များ၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌများ တက်ရောက်ခြင်း မရှိပေ
The post ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ မတွေ့ရတဲ့ တပ်မတော်နေ့ အခမ်းအနား appeared first on ဧရာဝတီ.
via ဧရာဝတီ http://ift.tt/1PyIVDq http://ift.tt/1OYtTeJ
Posted on March 21, 2016 by freeburma
သူရဦးရွှေမန်းခေါင်းဆောင်သည့် လွှတ်တော်ကော်မရှင်ကို စစ်တပ်မကန့်ကွက်
သူရဦးရွှေမန်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူထားတဲ့ ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ကို တပ်မတော်သား အမတ်တွေက ကန့်ကွက်ထားတာ မရှိဘူးလို့ တပ်မတော်ဘက်က[…]
The post သူရဦးရွှေမန်းခေါင်းဆောင်သည့် လွှတ်တော်ကော်မရှင်ကို စစ်တပ်မကန့်ကွက် appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/1Rbki3I http://burmese.dvb.no
Posted on March 16, 2016 by freeburma
သမ္မတသစ်နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မည်ဟု စစ်တပ်ကြေညာ
ဦးထင်ကျော်ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်မှုအတွက် တပ်မတော် အနေနဲ့ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပြီး သမ္မတသစ်နဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးက[…]
The post သမ္မတသစ်နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မည်ဟု စစ်တပ်ကြေညာ appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/1nNhAa0 http://burmese.dvb.no
Posted on March 8, 2016 by freeburma
စစ်တပ်ဘက်မှ ဒု-သမ္မတလောင်း သတင်းထွက်သူများကို ကမ်းလှမ်းထားခြင်း မရှိသေးဟု ဆို
နိုင်ငံရေးလေ့လာသူတွေက ခန့်မှန်းထားကြတဲ့ တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အစုအဖွဲ့ဘက်က တင်သွင်းမယ့် ဒု-သမ္မတလောင်းအဖြစ် သတင်းထွက်ပေါ်နေသူတွေက လက်ရှိအချိ်န်ထိ သူတို့ကို[…]
The post စစ်တပ်ဘက်မှ ဒု-သမ္မတလောင်း သတင်းထွက်သူများကို ကမ်းလှမ်းထားခြင်း မရှိသေးဟု ဆို appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/1U9Dzox http://burmese.dvb.no
Posted on February 26, 2016 by freeburma
တပ်မတော်အပေါ် သစ္စာမဲ့မှုများကြောင့် နိုင်ငံ့အရေးကိစ္စများတွင် များစွာရှုပ်ထွေးခဲ့ကြောင်း တပ်ချုပ်ပြော
တပ်မတော်အပေါ် သစ္စာမဲ့မှုများကြောင့် နိုင်ငံ့အရေး ကိစ္စများတွင် များစွာ ရှုပ်ထွေးခဲ့ ကြောင်း၊ ထိုသို့ ထပ်မံမဖြစ်စေရန် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၌ သတ်မှတ်ချက်အချို့ ထည့်သွင်းထား ခြင်းဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော်ကာ ကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်တွင် တပ်မတော်(ကြည်း)ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်း(ဗထူး)စစ်ရာထူးခန့်ထားရေးခန်းမဆောင်၌ ဗထူးတပ်နယ်မှ သင်တန်းသား အရာရှိများအား တွေ့ဆုံအမှာစ ကားပြောကြားရာတွင် ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦး စီးချုပ်က သစ္စာတရားနှင့် ပတ် သက်၍ ‘‘မင်းမှာသစ္စာ၊ လူမှာက တိ’’ဆိုသည့် စကားရပ်ရှိကြောင်း၊ သမိုင်းရာဇဝင်တွင် သစ္စာမဲ့သည့် လုပ်ရပ်များကြောင့် လွတ်လပ် ရေးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး သူ့ကျွန်ဘဝကျ ရောက်ခဲ့ရကြောင်း၊ လွတ်လပ် ရေးကြိုးပမ်းမှုသမိုင်းတွင်လည်း သစ္စာမဲ့သည့် လုပ်ရပ်ဖြစ်သည့် လုပ်ကြံမှုကြောင့် နိုင်ငံ့ခေါင်း ဆောင်များ ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း၊ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက်ပိုင်း သစ္စာမဲ့သည့် လက်နက်ကိုင်များ ကြောင့် […]
via Myanmar Electoral Resource and Information Network http://ift.tt/1pcQISa http://ift.tt/1Ov7XVN
Posted on February 24, 2016 by freeburma
ဒီမိုကရေစီကိုလက်ခံပါက လက်နက်စွန့်၍ ဥပဒေနှင့်အညီ တောင်းဆိုရမည်ဟု တပ်ချုပ်ပြော
ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုလက် ခံပါက လက်နက်စွန့်၍ တရား ဥပဒေနှင့်အညီ တောင်းဆိုမှုများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း တပ်မ တော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ် ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ကပြောကြားသည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင် လှိုင်က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်တွင် ကလောတပ်နယ်ရှိ စစ်ဦးစီးတက္က သိုလ်သင်တန်းသား အရာရှိများ နှင့် တွေ့ဆုံအမှာစကားပြောရာ၌ အထက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရရှိရန် လိုအပ်သည့်အတွက် တိုင်းရင်း သား လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများ ကို မဖြစ်မနေဖြေရှင်းရမည်ဖြစ် ကြောင်းနှင့် လက်နက်စွဲကိုင်၍ ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်၍မရဘဲ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို လက်ခံပါက လက်နက်စွန့်လွှတ်၍ တရားဥပ ဒေနှင့်အညီသာ ရယူလိုသည့် တောင်းဆိုမှုများ ပြုလုပ်ရမည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ထို့အပြင်နိုင်ငံသည် ဒီမိုက ရေစီသက်တမ်း ငါးနှစ်ခန့်သာ ရှိ သေးသဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ […]
via Myanmar Electoral Resource and Information Network http://ift.tt/1Ou1bNC http://ift.tt/1Ov7XVN
Posted on February 22, 2016 by freeburma
မြန်မာနိုင်ငံဟာ တရုတ်နိုင်ငံထံက လက်နက်တွေကို ၀ယ်ယူသုံးစွဲနေတဲ့ တတိယ အများဆုံး နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ စစ်ရေးဆိုင်ရာ သုတေသန အဖွဲ့ကြီးရဲ့ အစီရင်ခံစာသစ်က ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်တာ ကာလ အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ လက်နက် တင်ပို့ ရောင်းချမှုက ၂ ဆ တက်လာပြီး နည်းပညာပိုင်းမှာလည်း တိုးတက်မှု ရှိလာတယ်လို့ စစ်ရေးဆိုင်ရာ သုတေသန အဖွဲ့ကြီးရဲ့ အစီရင်ခံစာသစ်က ဖော်ပြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အနေနဲ့ တရုတ်ထံက လက်နက် ရဖို့ မှီခိုနေရတဲ့ အခြေအနေ ပြောင်းလဲ လာနိုင်ပါသလားဆိုတာကိုတော့ မသိင်္ဂီထိုက်…
via Voice of America http://ift.tt/1KEAxqH http://ift.tt/Tf1V41
Posted on February 17, 2016 by freeburma
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တတိယအကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဟာ နေပြည်တော် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်က ပေါင်းလောင်းရိပ်သာ ဧည့်ခန်း မဆောင်မှာ ဒီကနေ့ တစ်နာရီကျော်ကြာ တွေ့ဆုံခဲ့ ကြပါတယ်။
via သတင်းများ http://ift.tt/1QJaKdh http://www.rfa.org
Posted in Burmese Military - တပ်မတော်ဆိုင်ရာ	| Tagged Feedly, IFTTT, Military, Political Parties, Recently Read	| Leaveacomment |
Posted on February 13, 2016 by freeburma
စစ်သမိုင်းပြည်တိုက်ကို မည်သူမဆို အခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ပြီ
နေပြည်တော်၊ စစ်သမိုင်းပြတိုက်ကို မည်သူမဆို အခမဲ့ လာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးက သတင်းထုတ်ပါတယ်။ နေပြည်တော်၊ ဇေယျာသီရိမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးကားလမ်း[…]
The post စစ်သမိုင်းပြည်တိုက်ကို မည်သူမဆို အခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ပြီ appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/1PSGRuT http://burmese.dvb.no
Posted on February 9, 2016 by freeburma
မြန်မာ့တပ်မတော် စစ်သင်တန်းကျောင်း တခုမှာ ကျောင်းသားကြီးတွေက၊ ကျောင်းသားငယ်တွေကို အနိုင်ကျင့်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုတွေ မကြာသေးခင်ကပဲ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေမှာ ပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ မ ၁၀၀ သားတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ စစ်တပ်ထဲမှာ စည်းကမ်းလိုက်နာအောင်၊ အမိန့်နာခံတတ်အောင် ဒီလိုခပ်ကြမ်းကြမ်း ကိုင်တွယ်တာဟာ မဆန်းဘူးလို့ ဆိုနိုင်ပါသလား၊ ဒီလိုအလေ့အထတွေကနေ အဆိုးအကောင်း ဘယ်လိုရလဒ်မျိုးတွေ ထွက်ပေါ်လာနိုင်ပါသလဲ၊ ဆိုတာကို အင်္ဂါနေ့ တိုက်ရိုက်လေလှိုင်း အစီအစဉ်မှာ ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
via Voice of America http://ift.tt/1Q5QNwI http://ift.tt/Tf1V41
Posted on January 14, 2016 by freeburma
လုံခွုံရေးဆှေးနှေးမှု တပျနဲ့တိုငျးရငျးသား သဘောထားကှဲ
လုံခွုံရေး ကဏ်ဍနဲ့ပတျသကျလို့ တဈခုတညျးသော တပျမတျော ထားရှိရေးကိုသာ တပျမတျော ဘကျက အဓိက တငျပွခဲ့ပါတယျ။
via BBCBurmese.com | ပငျမစာမကျြနှာ http://ift.tt/1PerU1s http://ift.tt/1FstvxP
Posted on December 27, 2015 by freeburma
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ဒီကနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းမှာ ထိုင်းနိုင်ငံ အစိုးရ၀န်ကြီး ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ်နဲ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး General Prawit Wongsuwon၊ ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော် ဦးစီးချုပ်…
via Voice of America http://ift.tt/1OflRgQ http://ift.tt/Tf1V41
Posted on December 23, 2015 by freeburma
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သရေ စည်သူ မင်းအောင်လှိုင် တပ်မတော် သူနာပြုနှင့် ဆေးဘက်ပညာ တက္ကသိုလ်၊ သူနာပြုနှင့် ဆေးဘက်ပညာ သိပ္ပံဘွဲ့ သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၃) သင်တန်း ဆင်းဂုဏ်ပြု စစ်ရေးပြ အခမ်းအနား တက်ရောက် အမှာစကား ပြောကြား
via moi http://ift.tt/1NMbrSe http://ift.tt/1KnLGaX
Posted on December 18, 2015 by freeburma
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ် ဗိုလ်လောင်း သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၇) သင်တန်းဆင်းဂုဏ်ပြု စစ်ရေးပြအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြား
via moi http://ift.tt/1NtxU8C http://ift.tt/1KnLGaX